अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस गोरखामा पनि मनाइयो | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २८ श्रावण २०७६, मंगलवार ०९:४५
अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस गोरखामा पनि मनाईएको छ । दिवसको अबसरमा गोरखामा युवासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले गोष्ठी, अन्तरक्रिया, वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रम भएका छन् । पालुङटारमा समुदायमा युवा सहभागिता विषयक छलफल कार्यक्रम भएको छ ।
बौद्ध हिमाल युवा क्लबको आयोजनामा भएको विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका साथै युवाहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा युवाहरुको कर्तब्य र जिम्मेवारी, सुन्दर भविष्यका लागि अहिलेदेखिनै ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष लगायतका विषयमा छलफल भएको क्लबका अध्यक्ष किरण गिरिले जानकारी दिए । दिवसकै अबसरमा लायन्स क्लब अफ गोरखा दरौंदीले गोरखा नगरपालिका १० छेबेटारमा वृक्षारोपण गरेको छ । छेबेटारको भ्याकुतेकुवा जाने बाटोको भिरमा वृक्षारोपण गरिएको क्लबका विकास थापाले जानकारी दिए ।
यो बर्षको युवा दिवसको नारा शिक्षामा रुपान्तरण, उद्यमशीलता र नवप्रवर्द्धन रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९९९ देखि अगस्ट १२ तारिखमा यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो । नेपालमा भने सन् २००४ देखि मात्रै अन्तर्रा्ष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
२०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मान्दा कुल ४० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड सात लाख युवा छन् । अहिले युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपाल विश्वमा ७७ औँ नम्बरमा छ ।